Somaliland iyo Puntland oo ka hadlay dagaalka Tuka-raq - BBC News Somali
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay in "falal xaalad abuur ah colaad" ay ka waday deegaanada lagu muransan yahay ee Sool.
Wararka ayaa sheegayo in dagaal uu ka dhacay deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool, lamana oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay colaaddaasi dhexmartay ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland.
Wasiirka Warfaafinta ee Somaliland, Cabdiraxmaaan Cabdillahi Faarax (Giri-barwaaqo) ayaa sheegay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerareen deegaannada Qoriley iyo Tuka-raq.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay in wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland in ay booqdeen magaalada Dahar, wuxuuna ku eedeeyay in "khudbado kicin ah" ay ka jeediyeen halkaasi.
"Somaliland iyo dadkeedu waxay cadeynayaan in aanay mardambe u dulqaadan doonin xaaladaha noocaas ah diyaarna u yihiin in ay nabadgelyadooda iyo qarankooda difaacaan", ayuu yiri Guri Barwaaqo oo BBC Somali la hadlay.
Somaliland oo ka hadashay dagaal ka dhacay Tuka-raq
Laakiin, wasiirka amniga Puntland, Axmed Cabdullahi Yuusuf, ayaa sheegay la yaab ay ku noqotay arrinta oo saaka ay ka war heleen in ciidammada Somaliland ay "galeen xudduudooda".
Wasiir Axmed ayaa tallaabadaasi ku tilmaaamay "daandaansi", wuxuuna beesha caalamka u sheegay in aay ogaadaan "gardaro" uu sheegay in lagu hayo deegaannadooda.
Isagoo ka jawaabayay eeddo loo jeediyay ee ah in uu shacabka Dahar kiciyay wuxuu sheegay in "arrintaaasi aysan ahayn socod siyaasadeed, dhulkana uusan ahayn mid ay Somaliland leedahay".
Wuxuu intaa ku daray in meesha ay tahay "halkii ay ku dhasheen" safarkoodana uu ahaa mid horumar iyo mashaariic. "Soomaali dhammaanteen waa mid looga baahan yahay. waxay ahayd in la soo dhoweeyo mashaariicda dadka iyo deegaanka u keenaya horumar".
Puntland oo ka jawaabtay eeda Somaliland ee dagaalka Tuka-raq
Dhacdadan waxay imaaneysaa iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Garoowe, halkaas oo maanta uu ka furay garoon diyaarado oo malaayiin dollar lagu dhisay.
Maqal Dhageyso: Somaliland oo ka hadashay dagaal ka dhacay Tuka-raq
Maqal Dhageyso: Puntland oo ka jawaabtay eeda Somaliland ee dagaalka Tuka-raq